Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Guddiga Dalxiiska ee Seychelles ayaa soo bandhigay madal cusub oo dalxiis dalxiis
Isaga oo ku hagaya warshadaha da'da dijitaalka ah, Gudiga Dalxiiska ee Seychelles wuxuu soo bandhigayaa barmaamij cusub oo dalxiis dalxiis oo loogu magac daray "ParrAPI" Isniinta, Abriil 12, 2021, iyaga oo jooga Mont Fleuri Head Office.
Dalxiiska Seychelles wuxuu bilaabayaa suuq geyn dijitaal dijitaal ah oo wax-ku-ool ah si uu u soo jiito ganacsi intarnetka ka badan.
Barmaamij cusub ayaa bixiya habab wax ku ool ah oo lagu maareeyo liis gareyn tiro badan waxayna soo bandhigi kartaa ganacsiyo badan.
Macluumaadka ka shaqeeya warshadaha dalxiiska waxaa lagu heli karaa luuqado badan oo leh sawirro, fiidiyowyo, iyo macluumaadka hadda jira oo ku yaal hal meel oo bartamaha ah.
Barxad cusub oo loogu talagalay Dalxiiska Seychelles, ParrAPI, ayaa ka caawin doonta hawlwadeennada dalxiiska guud ahaan 12 qaybood inay ballaadhiyaan soo-gaadhista iyo ugu dambaynna soo jiitaan ganacsi badan oo khadka tooska ah leh suuq geyn dijitaal ah oo kharash-ku-ool ah.
Iyada oo magaceeda iyo astaanteeda ay dhiirrigelisay baqbaqaaq madow, ParrAPI waxay siisaa xal cusub oo wax ku ool ah oo lagu soo ururiyo, lagu hubiyo laguna wadaago macluumaadka dalxiiska qadka.